Peppermint ကြောင့် သင့်နှုတ်ခမ်းသားကို စိုပြေလှပစေမယ် ? အခုလို ရာသီအချိန်အခါမှာ Matte Lipstick ဆိုရင် Ketchup Matte Liquid Lipstick ကို သတိရလိုက်ပါ။ Matte Type ဖြစ်ပေမယ့် နှုတ်ခမ်းကို အရမ်းခြောက်သွေ့မနေစေဘဲ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ စိုပြေလှပတဲ့ နှုတ်ခမ်းအလှကို ရရှိစေပါတယ်။ ? No.1 Chocolate ? No.2 Pasta ? No.3 Ketchup ? No.4 BBQ ? No.5 Burger Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - ၈,၅၀၀ ကျပ်
မသိဘူး ဆိုးမယ် ? ဆောင်းတွင်းမှာ Matte Lip လဲဆိုးချင်တယ် နှုတ်ခမ်းသားခြောက်တတ်တဲ့သူလေးတွေ ရှိလားနော် ? ရှိတယ်ဆို Ketchup Matte Liquid Lipstick ကို မသိဘူး ဆိုးလိုက်တော့နော် Matte Type ဖြစ်ပေမယ့် နှုတ်ခမ်းကို အရမ်းခြောက်သွေ့မနေစေဘဲ စိုပြေလှပတဲ့ နှုတ်ခမ်းအလှကို ရရှိစေပါတယ်။ ? No.1 Chocolate ? No.2 Pasta ? No.3 Ketchup ? No.4 BBQ ? No.5 Burge Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - ၈,၅၀၀ ကျပ်
အားလုံးထက် တောက်ပနေမယ့် နှုတ်ခမ်းသားတစုံ ? ရောင်စုံမီးလုံးတွေရဲ့အောက် အများအလယ်မှာ စွဲဆောင်မှုရှိပြီး လှပနေဖို့ဆို Ketchup Matte Liquid Lipstick တော့ ရှိသင့်တယ်နော် ? အရောင်ထွက်မှန်ကန်ပြီး တစ်နေကုန်ခံတဲ့ Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပေးတယ်။ ? Paraben မပါဝင်လို့ နှုတ်ခမ်းအသားအတွက် စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ? No.1 Chocolate ? No.2 Pasta ? No.3 Ketchup ? No.4 BBQ ? No.5 Burger Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - ၈,၅၀၀ ကျပ်
ကိုကို့ရဲ့ အရမ်းဆိုးတဲ့ Bae လေးအတွက် ? အရမ်းရမ်းဆိုးတဲ့ Bae လေးတွေအတွက် တစ်နေ့တစ်မျိုး ပိုပိုဆိုးနိုင်ဖို့ Ketchup Matte Liquid Lipstick (၅) ရောင်ရှိပါတယ်။ တစ်ရောင်ချင်းဆီပဲ ဆိုးမလား❓ အရောင်ထွက်မှန်ကုန်ပြီး တစ်နေကုန်ခံတဲ့ Formula ကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှုကို အပြည့်အဝ ရရှိစေမှာနော် ? အရောင်စပ်ပြီး ဆိုးမလား❓ ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ဘယ်သူနဲ့မှ မတူတဲ့ အရောင်ထွက်တွေကြောင့် လှပနေမှာပါနော် ? ? No.1 Chocolate ? No.2 Pasta ? No.3 Ketchup ? No.4 BBQ ? No.5 Burge Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - ၈,၅၀၀ ကျပ်
တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့အလှနဲ့ #05 Burger ??? တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ အလှကို ပိုင်ဆိုင်ချင်သူတွေအတွက် Ketchup Matte Liquid Lipstick No.5 Burger ကို သုံးလိုက်နော် ? အရောင်ထွက်မှန်ကန်တိကျတယ် ? တစ်နေကုန်ခံတဲ့ Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတယ် ? နှုတ်ခမ်းသားကို ပိုမိုကျန်းမာစေတယ် ? နှုတ်ခမ်းသားကို ခြောက်သွေ့ ကြမ်းတမ်းမနေစေဘူး ? နှုတ်ခမ်းသားကိုလဲ Treatment ပေးတယ် Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - ၈,၅၀၀ ကျပ်
ရဲရင့်ပြတ်သားချင်းအတွက် #03 Ketchup ??? ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ Ketchup Matte Liquid Lipstick No.3 Ketchup ကို သုံးလိုက်နော် ? အရောင်ထွက်မှန်ကန်တိကျတယ် ? တစ်နေကုန်ခံတဲ့ Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတယ် ? နှုတ်ခမ်းသားကို ပိုမိုကျန်းမာစေတယ် ? နှုတ်ခမ်းသားကို ခြောက်သွေ့ ကြမ်းတမ်းမနေစေဘူး ? နှုတ်ခမ်းသားကိုလဲ Treatment ပေးတယ် Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - ၈,၅၀၀ ကျပ်
ငယ်ရွယ်နုပျိုခြင်းအသွင်နဲ့ #02 Pasta ??? ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ အလှကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆို Ketchup Matte Liquid Lipstick No.2 Pasta ကို သုံးလိုက်နော် ? အရောင်ထွက်မှန်ကန်တိကျတယ် ? တစ်နေကုန်ခံတဲ့ Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတယ် ? နှုတ်ခမ်းသားကို ပိုမိုကျန်းမာစေတယ် ? နှုတ်ခမ်းသားကို ခြောက်သွေ့ ကြမ်းတမ်းမနေစေဘူး ? နှုတ်ခမ်းသားကိုလဲ Treatment ပေးတယ် Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - ၈,၅၀၀ ကျပ်
ချိုမြိန်တဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ #01 Chocolate ??? ချိုမြိန်တဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင်လေး ဖြစ်ဖို့ Ketchup Matte Liquid Lipstick No.1 Chocolate ကို သုံးလိုက်နော် ? အရောင်ထွက်မှန်ကန်တိကျတယ် ? တစ်နေကုန်ခံတဲ့ Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတယ် ? နှုတ်ခမ်းသားကို ပိုမိုကျန်းမာစေတယ် ? နှုတ်ခမ်းသားကို ခြောက်သွေ့ ကြမ်းတမ်းမနေစေဘူး ? နှုတ်ခမ်းသားကိုလဲ Treatment ပေးတယ် Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - ၈,၅၀၀ ကျပ်